न्यू योर्कको पाँचौं एभिन्यूमा सर्वश्रेष्ठ पसलहरू यात्रा समाचार
मारिएला क्यारिल | | सामान्य, न्यूयर्क
न्यूयर्क दर्शनीय स्थलहरूको लागि यो संसारको एक उत्तम शहर हो। यो सबै प्रकारको र प्रदान गर्दछ धेरै स्टोरहरू यस शताब्दीको विशिष्ट उपभोक्ता ज्वरोमा रमाउन।
सत्य यो हो कि यदि तपाइँ किनमेल गर्न जान चाहानुहुन्छ, 5th एभिन्यूको साथ पैदल यात्रा आवश्यक छ। सडक ऐतिहासिक छ र म्यानहट्टनको मुटुमा। सब भन्दा राम्रो पसल 39 th र 60० स्ट्रिटहरूको बीचमा अवस्थित छन्यद्यपि यो पक्कै पनि सुरुदेखि अन्तसम्म हिंड्नु सधैं मोहक हुन्छ ...
1 प्रसिद्ध 5th औं एभिन्यू
3 कपडा पसल
प्रसिद्ध 5th औं एभिन्यू
यो पनि भनिन्छ "संसारको सब भन्दा महँगो सडक" र यद्यपि यो किनमेल प्याराडाईज हो तर तिनीहरू मध्ये केही एकदम महँगो र विशिष्ट हुन सक्छ।
त्यस पछि यो प्याट्रिसियन मूल हो एक व्यावसायिक सडक हुनु अघि यो एक आवासीय अवसर थियो न्यूयोर्कमा सबैभन्दा धनी परिवारहरू भेटे जसमा १ th औं र २० औं शताब्दीको सुरुतिर फर्किए।
धेरै शहर मा सबै रमणीय र ऐतिहासिक भवनहरु। तर यस पटक यो पर्यटक पैदल होइन तर किनमेल हो त्यसैले हामी हेरौं जुन 5th एवेन्यूमा सबै भन्दा राम्रो स्टोरहरू हुन्.
यो ब्रान्डको मुख्य स्टोर हो, यो एप्पल स्टोर भव्य सेन्ट्रल। यो एवेन्यूको 767 नम्बरमा अवस्थित छ र बर्षको हरेक दिन खोल्नुहोस्। यो स्टोर हो जुन कहिले पनि बन्द हुँदैन र एक शानदार डिजाइन, सिलिन्ड्रिकल लिफ्ट, गिलास सिढी, र करीव workers०० कामदारहरू छन्।
यो सबै हेर्नको लागि स्टोर हो ब्रान्डेड उपकरणहरू, सफ्टवेयर र विशेष सेवाहरू। प्रदान गर्दछ सेवा अधिकृत, तपाईं आफ्नो मोबाइल अपडेट गर्न सक्नुहुनेछ, तपाईंले अनलाइन र अधिक बनाउनु भएको खरीदहरू स .्कलन गर्नुहोस्।
यस समयमा यो नविकरण कार्यमा छ तर जे भए पनि मुख्य प्रवेशद्वार पछाडि बन्द छ, यो अझै काम गरिरहेको छ।
अवश्य पनि प्रमुख खुद्रा ब्रान्डहरू, फेशनेबल र सस्तो वस्त्रहरू यहाँ छन् त्यसैले तपाईंसँग हुनुहुन्छ H&M, Abercrombie & फाईल, Gap र Zaraउदाहरण को लागी। एउटा क्लासिक जुन तपाईं भ्रमण गर्न चाहानुहुन्छ, किनकि यो प्राय: टेलिभिजन श्रृंखला र चलचित्रहरूमा देखा पर्दछ, हो Saks, 611११ मा अवस्थित
खेलहरूमा तपाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ एडिडास, नयाँ स्टोर, पुनर्जन्म स्नीकहरूको स्टोर नयाँ शेष, निकटकाउन, रिबोक वा यो उत्तर अंकित साहसीहरूका लागि।
तपाई उसलाई मन पराउनुहुन्छ श्रृंगार र सौन्दर्य उत्पादनहरू? L'Occitane अवस्थित छ, उही MAC, Sephora र Redken।
अधिक विशेष खरीदहरू गर्न तपाईंसँग ह्यूगो बॉस, साल्भाटोर फेरागामो, को स्टोरहरू छन् भ्यान गहना सफा & आर्पल्स, प्रादा वा टिफनी। र यदि तपाईं खरीद गर्नुहुन्न, हेर्दा केही मूल्य हुँदैन।
त्यहाँ पल को ब्रान्डहरु, जस्तै छन् Uniqlo, तर त्यहाँ आइकनिक जस्तो दशकौं देखि सडकमा उपस्थिति सहित क्लासिक ब्रान्डको कुनै कमी छैन गिलास, केरा गणतन्त्र, DKNY वा डीजल।
यदि तपाईंको गन्तव्य न्यूयोर्क मात्र हो भने, तपाईं फाइदा लिन सक्नुहुन्छ र टूर ट्राभल लिन सक्नुहुन्छ Walt डिज्नी स्टोर जहाँ तपाईं डिज्नी को अद्भुत संसारको बारेमा सबै पाउन सक्नुहुन्छ, वा अर्को विकल्प, हो एनबीए स्टोर, बास्केटबल प्रशंसकहरूको लागि, भर्खरै खोलियो।
केहि सबै भन्दा राम्रो किनमेल केन्द्रहरु शहर को यस प्रसिद्ध एवेन्यू मा छन्: बर्गडोर्फ Goodman (754 57, 58 XNUMX र between XNUMX बीच), Saks पाँचौं एभिन्यू र भगवान र टेलर (नम्बर 424२XNUMX मा)। ती मध्ये पहिलो कपाल र नाखून, सौन्दर्य प्रसाधन को सौन्दर्य मा विशेषज्ञता, तर यो मौसम वा घटना को लागी को लागी सुरु भयो विन्डोज को लागी धेरै प्रसिद्ध छ।
यो मल वा डिपार्टमेन्ट स्टोर १1899 opened मा खोलियो एक फ्रान्सेली आप्रवासी संग हात मा तर यो गुडम्यान नाम गरेको एक युवा प्रशिक्षु थियो जसले सानो पसललाई सुनको खानीमा परिणत गर्‍यो।
5th औं एभिन्यूमा सरेको १ 1928 २। मा भएको थियो र यो भेट्न लायक छ, यो भवन धनी भान्डर्बिल्ट परिवारको लागि हवेली थियो।
5th औं एभिन्यु एक पैदल तल एक भन्दा बढी गतिविधि संयोजन गर्न सक्दछ किनकि यद्यपि पसलहरूको भीड अत्यधिक हो तपाईंसँग विचारको अन्य प्रकारहरू छन्। यो शुरुआत मा भन्यो कि धेरै अधिक ऐतिहासिक भवनहरू न्यू योर्क शहर बाट यहाँ छन् त्यसैले यो पनि राम्रो मौका उनीहरु लाई चिन्न।
आज यी भवनहरूमा केही पसलहरू छन् तर क्याफेहरू, होटलहरू, रेस्टुरेन्टहरू, संग्रहालयहरू वा साधारण कार्यालयहरू पनि छन्। प्रसिद्ध लिलामी घरको केन्द्रीय घर छ क्रिस्टी गरेको, the कोका कोला भवन, the साम्राज्य राज्य भवन, ला फ्रान्स दूतावास, को मेगा स्टोर Fujifilm वा ट्रम्प टावर।
El गुग्नेहेम संग्रहालय, the यहूदी संग्रहालय, Le दर्द Quotidien को सुगन्धित पसल, महानगर कला संग्रहालय, the मोमा वा आधुनिक कलाको संग्रहालय, प्लाजा होटल, रकफेलर केन्द्र यसको विहार र यसको वेधशालाको साथ सेन्ट स्टीफन क्याथेड्रल, 5th औं एभिन्यू सिनागग, न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय त्यो फिल्ममा देखा पर्दछ पर्सि…
के तपाईं बच्चाहरु संग जाँदै हुनुहुन्छ? बच्चाहरू धेरै हिंड्न मन पराउँदैनन् त्यसैले तपाईं तिनीहरूलाई इनाम र लाभ उठाउनको लागि एक उत्कृष्ट ठाउँ हो र राम्रो मौसममा आफूलाई आराम गर्नुहोस् एफएओ खेलौना स्टोर Schwarzer.
यो बारेमा छ खेलौना स्टोर टम अभिनीत '80s चलचित्रमा चित्रित हैंक्स, बिग वा म महान हुन चाहन्छु जस्तो कि यो स्पेनिश भाषा बोल्ने संसारमा चिनिन्थ्यो। यो एस्केलेटरहरू, एक विशाल पियानो छ जहाँ तपाईं नाच्न सक्नुहुन्छ, को सम्भावना बार्बी डिजाइन गर्नुहोस्, तातो कारलाई अनुकूलित गर्नुहोस् पाङ्ग्रा वा क्यान्डी किन्नुहोस्। ह्यारी पॉटर, लेगो, प्लेमोबाईल र जे तपाइँ चाहानुहुन्छ।
न्यू योर्क पर्यटन वेबसाइटमा तपाईंसँग गुगल नक्शाको नक्सामा भण्डारहरूको पूर्ण सूची र तिनीहरूको स्थान छ। यो सुपर उपयोगी छ र तपाईंलाई एक यात्रा आयोजना गर्न अनुमति दिन्छ ताकि तपाईं कुनै पनि कुरालाई याद गर्नुहुन्न।
खुशी! पैसा, धैर्य र ऊर्जा बचत गर्नुहोस् किनकि कोही 5th एभिन्यूबाट भाग्दैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » शहरहरू » न्यूयर्क » न्यूयोर्कको फिफथ एवेन्यूमा सबै भन्दा राम्रो पसलहरू
सत्य यो छ कि सर्वश्रेष्ठ वाणिज्य न्यूयोर्कमा छ। मँ मेरो हेर्मा क्यू लाई बस्ने दिनको लागि बधाई पठाउँछु।
यीमीलाई जवाफ दिनुहोस्
एन्टोनियो मार्टिनेज भन्यो
यो रिपोर्ट रुचि छ, तर एउटा प्रश्न यो राष्ट्रिय स्तरमा संयुक्त राज्य अमेरिकामा समान मूल्य हुनेछ, तर के यो मियामीमा शपिंगको लागि एक समानता हुनेछ? वा यो अधिक सम्भावित हो?
एन्टोनियो मार्टिनेजलाई जवाफ दिनुहोस्
मार्गारीटा डे गार्सिया भन्यो
म लफ्टमा महिलाको लुगा किन्न चाहन्छु। म इक्वेडरमा बस्छु। धन्यबाद
मार्गारीटा डी गार्सियालाई जवाफ दिनुहोस्
नेस्टर गुएरेरो भन्यो
नमस्कार ... .. कस्तो छ, म न्यू योर्क मन पराउँछु, म यसको मान्छेलाई, यसको इतिहासलाई, यसको दृढ संकल्पलाई माया गर्छु, म यसलाई माया गर्छु। हैन, म भेनेजुएला, वकिल हुँ, चाँडै नै म त्यहाँ हुनेछु, विश्वास गर्नुहोस् ... !!!!!!!!!!!!!
नेस्टर गुएरोलाई जवाफ दिनुहोस्
गर्मीमा चिसो गर्न स्पेनमा उत्तम natural प्राकृतिक पोखरीहरू
मक्का यात्रा को चुनौती